ဒီလို တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာ မင်းအတွက် ကံဆိုးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ကွာ..(စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ကလေးရာယ်..) – အနုပညာရပျဝနျး
ဒီလို တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာ မင်းအတွက် ကံဆိုးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ကွာ..(စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ကလေးရာယ်..)
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ တော်ခရမ်းကြီးညောင်ဝိုင်းကျေးရွာမှ ၆ တန်း ကျောင်းသားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ဟာ လယ်စောင့်တဲအတွင်း အိပ်နေရာမှ ကလေးငယ်ရဲ့ လက်ကိုမြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါတယ်။ မြွေကိုက်ခံရမူကြောင့် မိဘများမှ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ အချိန်မှီ ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်…
ဒါပေမယ့်….(ဒီ ဒါပေမယ့်ဆိုတဲ့ စကားရဲ့နောက်မှာ အသက်တစ်ချောင်းပေးဆပ်လိုက်ရပါတယ်။) ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ အသွား ပန်းလှိုင်တံတား အရောက်မှာပဲကလေးဟာ အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ချို့သောဝန်ဆောင်မှုများမှာ အခုချိန်ထိ ဝေဖန်ပြောဆိုစရာတွေကရှိနေစဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆရာမ အားလုံးကို မဆိုလိုပါ။ တစ်ချို့ဆိုလည်း မနားမနေပင်ပန်းကြီးစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆရာဝန်ဆရာမ သူနာပြုတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ဆရာဝန် ဆရာမတွေဟာ ကိုယ့်ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ကိုမှမထောက် မောက်မာတာ လူနာကို သိပ်ပီးအရေးမလုပ်တာ၊ အချိန်မှီဆောင်ရွက်စရာတွေကို မလုပ်တာတွေဟာ တစ်ဖက်မှာပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေက ဘ၀တွေအသက်တွေပါဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ
ကှမျးခွံကုနျးမွို့ တျောခရမျးကွီးညောငျဝိုငျးကြေးရှာမှ ၆ တနျး ကြောငျးသားအရှယျ ကလေးတဈယောကျဟာ လယျစောငျ့တဲအတှငျး အိပျနရောမှ ကလေးငယျရဲ့ လကျကိုမွှဟေောကျကိုကျခံရပါတယျ။ မွှကေိုကျခံရမူကွောငျ့ မိဘမြားမှ အရေးပျေါ ကယျဆယျရေး လုပျရနျ ကွိုးစားခဲ့ပွီးမွို့နယျဆေးရုံသို့ အခြိနျမှီ ပို့ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ…
ဒါပမေယျ့….(ဒီ ဒါပမေယျ့ဆိုတဲ့ စကားရဲ့နောကျမှာ အသကျတဈခြောငျးပေးဆပျလိုကျရပါတယျ။) ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသို့ လှဲပွောငျးပေးပွီးနောကျ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသို့ အသှား ပနျးလှိုငျတံတား အရောကျမှာပဲကလေးဟာ အသကျဆုံးရှုံးလိုကျရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျလို့ တဈခြို့သောဝနျဆောငျမှုမြားမှာ အခုခြိနျထိ ဝဖေနျပွောဆိုစရာတှကေရှိနစေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆရာဝနျဆရာမ အားလုံးကို မဆိုလိုပါ။ တဈခြို့ဆိုလညျး မနားမနပေငျပနျးကွီးစှာ တာဝနျထမျးဆောငျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို ဆရာဝနျဆရာမ သူနာပွုတှကေိုလညျး လေးစားပါတယျဗြာ။
ဒါပမေယျ့ တဈခြို့သော ဆရာဝနျ ဆရာမတှဟော ကိုယျ့ရာထူးဂုဏျရှိနျကိုမှမထောကျ မောကျမာတာ လူနာကို သိပျပီးအရေးမလုပျတာ၊ အခြိနျမှီဆောငျရှကျစရာတှကေို မလုပျတာတှဟော တဈဖကျမှာပေးဆပျလိုကျရတာတှကေ ဘဝတှအေသကျတှပေါဆိုတာကိုပွောခငျြတာပါ။ အားလုံး ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစဗြော
ရန်ဖြစ်နေတဲ့ လင်မယားကြားထဲဝင်တဲ့ အမျိုးသားရဲ့ စိတ်မကောင်းဖွယ်အဖြစ်…
ဒီလိုအသက် ၁၃နှစ် အရွယ်ကလေးမှာ ဘာအပစ်ရှိလို့ ဒီလိုလုပ်ရပ်တာလဲဗျာ…